Imininingwane - I-unCommission
Izinto ezintathu zivele ngokuzwakalayo nangokucacile ezindabeni ze-UnCommission. Le mininingwane, eqondiswa amazwi ababalisi bethu, isiza ukuhlanganisa ikusasa lokufunda kwe-STEM.
Intsha ayizange iphele amandla; baxoshiwe, futhi bafuna ukwenza umehluko nge-STEM
Ngaphansi kwezinyanga ezintathu nje, cishe abantu abasha abangama-600 ezweni lonke babelane ngezindaba zabo ne-UnCommission. Ngokuphindaphindiwe, ababalisi babelane ngesifiso sabo sokusebenzisa i-STEM ukuxazulula izinselele zomhlaba wangempela emiphakathini yabo nasemhlabeni.
Thina njengentsha sifuna ngempela into esingayisebenzisa emhlabeni wangempela...ngokwesibonelo kukhemistri, sifunda konke mayelana nezimo zendaba ukuthi zishintsha kanjani kanye namafomula nezindleko ezihambisana nakho, okungase kuxake futhi kukhungathekise qonda, ngeke sazi ukuthi kungani kubaluleke ngempela...Futhi lokhu ukujika ngokushesha okungaka abafundi abaningi abanawo emakilasini e-STEM. Ngakho-ke, manje kuphakamisa umbuzo othakazelisayo: kuthiwani uma? kuthiwani uma senza imfundo isebenze kangcono? sibonisa abafundi ukuthi ukufunda esikoleni kubaluleke kangakanani empilweni yabo yansuku zonke? Ngiyakwazi nje ukucabanga ukuthi kungaba umfutho onamandla kangakanani.”
- URhea, oneminyaka engu-18 ubudala, eVirginia
Ukuze uphumelele ku-STEM, abantu abasha badinga ukuzizwa bengamalungu e-STEM
94% labaxoxi bezindaba okuxoxwe ngakho ngokuqondene noma okungeyona ingxenye yesipiliyoni ababelana ngaso ne-UnCommission. Ngokuvamile isigameko esisodwa esaletha imizwa yokuba yingxenye yedlula isipiliyoni sokungesona esakhe. Empeleni, 40% wabaxoxi bezindaba ababenombono wokuthi ababona abe-STEM basitshele ngesipiliyoni esibashintshile ukuze bazizwe sengathi bangabakwa-STEM, okubonisa ukuthi ukuzicabangela ngokwakho nge-STEM akulungisiwe kakhulu! Izindaba ziphinde zembula ukuhlobana okuhle phakathi kokuzizwa ungowakho kanye nokuphishekela izifundo ze-STEM esikoleni esiphakeme nasekolishi futhi, ekugcineni, njengomsebenzi we-STEM.
"Ngonyaka wami omncane, balethe ikilasi elisha esikoleni sami, okwakuyisingeniso sesayensi yedatha…[uthisha] wakhuluma nami, futhi ufana nokuthi, kunekilasi elisha ngempela engizolifundisa. Futhi ngicabanga ukuthi uyithanda ngempela, sengathi isendaweni yakho kanye nalokho okuthandayo, futhi bengifana nje, nginovalo futhi ngesaba, ngithanda, ngizothatha leli klasi lezibalo elisha. akekho owake wathatha ngaphambilini….Futhi lapho sengiqale ukufunda, futhi ngithanda ukufunda yonke into, ngakuthanda kakhulu….leso sigaba kwakuyiphuzu langempela elibalulekile emfundweni yami kusukela lapho.”
— U-Emilio, oneminyaka engama-22, eCalifornia
Othisha bangamandla anamandla kakhulu okukhuthaza ukuba ku-STEM
68% ngesikhathi lapho ababalisi bebika ngokushintsha kwempahla, uthisha wenza lokho kwenzeke. Abaxoxi bathi othisha babo bakhulisa ingane 25 Amaphesenti amaphuzu ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umuntu noma ulwazi ezimpilweni zabo. Eqinisweni, ababalisi abaningi bathonywa kakhulu othisha babo be-STEM kangangokuthi baba othisha be-STEM ngokwabo! Abansundu, boMdabu baseMelika, kanye nabaxoxi bezindaba be-LGBTQ babe 2x njengoba kungenzeka bakhulume ngokuzizwa befanelekile ngokuzihlanganisa nohlanga lothisha babo noma ubulili kunabanye. Ngeshwa, abaNsundu, boMdabu baseMelika, kanye nabaxoxi bezindaba be-LGBTQ baphinde baxoxa ngokucwasa kothisha noma ukucwasa ngobulili. 2x njalo njengabanye ababalisi.
"UDkt. N, angisoze ngamkhohlwa. Waqhubeka nefa labo kimi, ngokuba nothisha abaNsundu, othisha besilisa abamnyama, abakwazi ukungifundisa izibalo futhi bafake lolo hlobo lokuzethemba nokuzethemba engangikubona. mina ngokwami ​​bese ngithi, 'O, ungakwenza,' noma, 'kuzame ngale ndlela,' noma nje ngibambe isandla sami kancane, engicabanga ukuthi iningi labafundi abaNsundu mhlawumbe abalitholi…”
- Ongaziwa, oneminyaka engama-22, e-Oklahoma